Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-United Airlines: Thola i-COVID-19 jab noma ulahleke
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
I-United Airlines: Thola i-jab noma ulahleke
Abasebenzi be-United Airline abenqaba umuthi wokugoma i-COVID-19 ngeke bavunyelwe bangene emsebenzini ngemuva kuka-Okthoba 2.
I-United Airlines imemezela igunya lokugoma i-COVID-19 kubasebenzi.
I-United Airlines enqaba i-COVID-19 jab izokhishwa.
Abasebenzi bezindiza abakhululwe emithini yokugoma bazofakwa ekhefini elingapheli.
Embhalweni wenkampani othunyelwe izolo, i-United Airlines imemezele ukuthi bonke abasebenzi bezindiza abathola ukukhululwa kwezenkolo, ezokwelapha noma okomuntu siqu emtholampilo oyimpoqo we-coronavirus bazothunyelwa ngekhefu elingakhokhelwa noma lezokwelapha unomphela, kungakhathalekile ukuthi banasizathu sini sokukhululwa noma isimo sabo.
"Lapho ubhadane seluhlehla ngokunengqondo, uzokwamukelwa eqenjini ngesimo esisebenzayo," kusho abashayeli bezindiza, abagibeli bezindiza kanye nabenzeli bamakhasimende - abachazwe njengabasebenzi "ezindimeni ezibhekene namakhasimende ezisebenzayo" - batshelwa kwimemo.
Lufthansa abasebenzi abangahlangani ngqo nabagibeli, njengabathumeli nemishini, abavunyelwe ukukhululwa kuzodingeka ukuthi bahlolwe masonto onke futhi bagqoke imaski ngaso sonke isikhathi lapho besemsebenzini, kufaka phakathi nalapho bengaphandle.
Noma ngubani onikezwe umbandela wokuthola usizo lwezempilo uzofakwa ekhefini lokwelashwa lesikhashana. Labo isicelo sabo sokukhululwa sinqatshiwe kuzodingeka bathathe isibhamu sokuqala ngoSepthemba 27 futhi bagonywe ngokuphelele kungakapheli amasonto amahlanu noma balahlekelwe umsebenzi ngokuphelele, ngokusho kwememo ethunyelwe yi-VP yezabasebenzi uKirk Limacher.
Abaphathi be-United Airlines bebengacacisanga ukuthi umphathi uzothanda kangakanani ukunikeza izicelo zokuxolelwa, futhi inkampani yezindiza ayikasho ukuthi itholile engaki.
I-United kwakuyinkampani yezindiza yokuqala yase-US ukuphoqa igunya lokugoma i-COVID-19 kubasebenzi bayo abangama-67,000-plus, ekuqaleni kuka-Agasti. Ezinye izindiza sezithuthele ukuqeda ukukhokhelwa kwabasebenzi abangagonyiwe abahlola ukuthi banegciwane. Delta Air Lines ushaye imali engaphezulu kwe- $ 200 kumaphrimiyamu okunakekelwa kwezempilo kwabasebenzi abangakagonywanga.
Izinkampani zase-US nezinhlangano zikahulumeni kulindeleke ngokusemthethweni ukuthi zinikeze ukukhululwa ngezizathu zenkolo noma zezokwelapha, yize kungenjalo kungabanika. Abaphathi beBiden baphoqelele igunya lokugoma lomphakathi nelizimele njengoba inani lamacala e-COVID-19 e-US lenyukile ehlobo.
Izindiza, nezinyunyana zabashayeli bezindiza kanye nabasebenza ezindizeni bakwamukele ngokulangazela ukwelulwa okubonakala kungapheli kwamandla egunya likahulumeni lokuvikela imaskhi, elenziwa okokuqala ngoFebhuwari futhi kuhloswe ukuthi lihlale izinsuku eziyi-100.
I-United yinkampani yezindiza yesine ngobukhulu e-United States ngenani labagibeli abathwalwayo, kodwa inemikhumbi yesibili ngobukhulu futhi isebenza kakhulu izindawo, ngokusho kwezibalo zangaphambi kobhadane.